Ny fanontaniana mikasika ny fomba hahitana asa tsy misy traikefa dia mahaliana ny sain'ny mpianatra tsirairay. Maro ireo no gaga, saingy mitranga izany, na dia efa nahazo diplaoma avy amin'ny orinasam-pampianarana miaraka amin'ny mari-pahaizana mena aza izy dia tsy manova na inona na inona. Ny mpampiasa amin'io lafiny io dia mahaliana ny karazana olona manana fahaiza-manao, fa tsy ny fanombanana azony tamin'ny lasa.
Ahoana no ahitanao asa ho an'ny tanora manam-pahaizana iray tsy manana traikefa?
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia ny fomba hanombohana fikarohana asa ho an'ny mpitsabo tsy manana traikefa. Na dia mbola tsy niasa ho an'ny asa aza ianao, dia mbola mila miezaka mamorona miverina mendrika ianao. Ilaina ny mahafantatra sy mandinika ny zava-misy fa amin'ny alalan'ny resume no ahafahanao miditra amin'ny resadresaka.
Tsy ilaina ny maneho fiheveran-tena manokana ao anatin'io antontan-taratasy io, fa koa mba hanamafisana ny zava-misy dia tsy mandeha ihany koa. Soraty fa amin'ny fanonerana ny tsy fahampian'ny traikefa dia efa voaofanao haingana ianao ary manao ny ezaka tsara indrindra hahatrarana vokatra tsara.
Ampiasao ny herin'ny Internet
Mba hahitana asa aorian'ny fiorenan'ny institiota tsy manana traikefa dia ilaina ny mijery ny fikarohan'izy ireo ho toy ny fahafahana handamina ny fiainanao, noho izany dia zava-dehibe ny fanaovana ezaka lehibe indrindra. Soraty ny adiresy e-mail an'ny orinasa rehetra ho an'ny fanatanjahanao ary alefaso ny resadresanao. Aza manao tsinontsinona ny orinasa madinika, satria tsy misy fahasamihafana ny toerana ahafahanao mahazo traikefa voalohany.
Raha tsy vintana ela be ianao, dia mety ho mendrika ny handao ny faritra mampionona anao ary hifantoka amin'ny tanàna hafa.
Manorata tranonkala isan-karazany mba hahita asa. Manorata ny tenanao momba ny fahabangana amin'ny toerana misy anao.
Mandehana amin'ny zavatra rehetra azo atao
Afaka miezaka foana ianao hahita asa tsara, miaraka amin'ny traikefa, ary tsy manana traikefa amin'ny asa, miaraka amin'ny fanampian'ny namana sy ny fianakaviana. Amin'izao toe-draharaha izao, tsy mahamenatra ny miezaka ny mipetraka amin'ny olom-pantatra.
Indraindray, ny faritry ny fifandraisana dia tsy afaka manampy anao amin'ity olana ity, ary anontanio ny olom-pantany. Aza manery olona hitady toerana efa vonona - matetika raha adina fotsiny ianao.
Alao ny fanantenanao
Raha toa ny fanontaniana mikasika ny toerana ahitana asa tsy misy traikefa, dia mbola misy fotoana manan-danja, dia fotoana izao ny manafoana ny zavatra antenainao. Soraty ao amin'ny famintinana, ohatra, fa vonona ny hanao fianarana maimaim-poana ianao. Jereo ireo tranokala ho an'ny salan'isa salantsalany ho an'ny fahaiza-manaonao manokana ary angataho kely io ambany io.
Ahoana ny hiditra Harvard?
Ny raharaham-behivavy - raharaha ho an'ny vehivavy manana fampiasam-bola madinika
Fanoloran-tena sy fanentanana ho an'ny mpiasa
Vola Crypto - inona ary izany ary miankina amin'ny sandan'ny crypto vola?
Ahoana no hianaranao hanoratra boky?
Ny sakafo maraina marina ho an'ny fahaverezan'ny lanja
Ahoana no fomba hitarainako?
Ny soritr'aretin'ny aretina ateraky ny vehivavy
Ny footballer Cristiano Ronaldo dia niresaka momba ny dadany taloha
Kalynita amin'ny vehivavy - fitsaboana
"Trondro ao amin'ny aquarium" - applique
Packages ho an'ny fanesorana ronono
Fanafody mando mandritra ny fitondrana vohoka